Horudhac: Atletico Madrid vs Real Madrid… (Darbiga caasimadda Spain oo soo nooleyn kara loollanka La Liga) – Gool FM
(Madrid) 07 Maarso 2021. Mid ka mid ah kulammada ugu xiisaha badan horyaalka La Liga ayaa maqribka maanta lagu madalsan yahay garoonka Wanda Metropolitano ee ku yaallada magaalada caasimadda u ah Spain ee Madrid.
Kooxaha Atletico Madrid iyo Real Madrid ayaa ku balansan ciyaar ka tirsan horyaalka iyadoo Atletico ay shan dhibcood ka sarreyso dhiggeeda dhanka kala sarreynta horyaalka ka hor ciyaartan walow kooxda Diego Simeone ay kulan faraqa ku heysato.
Saacadda ay ciyaarta billaabaneyso: 18:15 Habeennimo xilliga geeska Afrika.
Atletico Madrid ayaa la rajeynayaa inaysan heli doonin difaaca reer Uruguay ee Jose Maria Gimenez dhaawac soo gaaray awgiis, balse waxay dib u heleysaa Yannic Garrasco oo garoommada kaga maqnaa dhaawac cagta kasoo gaaray.
Atleti ayaa sidoo kale dib u heleysa difaaceeda Kieran Trippier kaasoo soo dhammeystay ganaax 10 kulan ah kaddib markii lagu qabtay qamaar sharci darro ah, waxaana xiddiga reer England la rajeynayaa inuu kusoo bilawdo ciyaartan.
Eden Hazard, Mariano Diaz, Dani Carvajal iyo Sergio Ramos ayaa dhammaantood dhaawacyo kaga maqnaan doona Real Madrid, inkastoo la filayo in Karim Benzema uu qayb ka noqdo ciyaartan kaddib markii Macallin Zinedine Zidane uu xiddigan kusoo daray safkiisa kulankan.
Guud ahaan kooxaha Real Madrid iyo Atletico Madrid ayaa wada ciyaaray 226 kulan dhammaan tartammada, waxayna Los Blancos kulammada Fool Ka Foolka ah ku hoggaamineysa 112 guul, halka Rojiblancos ay heysato 56 guul.
Real Madrid ayaa guul gaartay labadii kulan ee ugu dambeysay labadan koox wada ciyaareen horyaalka La Liga, waxaana ku jira guushii ugu dambeysay ee ay garoonka Alfredo Di Stefano kaga gaartay bishii December ciyaar ku dhammaatay 2-0.
Atletico wax guul ah kama aysan gaarin dhiggeeda kulammada La Liga tan iyo February 2016 ciyaar Bernabeu ka dhacday oo ay kooxda Diego Simeone ku adkaatay 1-0.
Shan ka mid ah siddeeddii kulan ee ugu dambeysay oo ay labadan koox isaga hor imaadeen La Liga ayaa ku dhammaaday barbarro.
Atletico Madrid ayaa ah kooxda labaad ee ugu goolasha badan La Liga xilli ciyaareedkan iyadoo ka dambeysa Barcelona, waxayna dhalisay 47 gool kaddib 24 kulan, 16 ka mid ahna waxay ka imaadeen Luis Suarez.
Atletico ayaa heysata rikoorka ugu wanaagsan ee dhanka difaaca fasalkan horyaalka La Liga, waxaana laga dhaliyay kaliya 16n gool, kooxda kusoo xigtana waa Sevilla oo 18 jeer shabaqeeda la gaaray.
Atletico Madrid ayaa guuldarro la kulantay kaliya labo jeer 38-kii kulan ee ugu dambeeyay La Liga.
Atletico Madrid ayaa ku guuldarreysatay inay gool ka dhaliso Real Madrid afartii kulan ee ugu dambeysay dhammaan tartammada oo ay wada ciyaareen.
Atletico Madrid ayaa garaacday Real Madrid kaliya hal kulan 10-kii kulan ee ugu dambeysay La Liga.
Real Madrid ayaa guuleysatay shan ka mid ah lixdii kulan ee ugu dambeeyay dhammaan tartammada, waxaana ku jira afar ka mid ah shantii kulan ee ugu dambeysay horyaalka.
Real Madrid ayaa 28 dhibcood uruursatay 28 dhibcood 13 kulan oo ay bannaanka kusoo ciyaartay horyaalka xilli ciyaareedkan, iyagoo la kulmay kaliya hal guuldarro.
Los Blancos ayaa shabaqeeda difaacatay dhammaan afartii kulan ee ugu dambeysay dhammaan tartammada oo ay la ciyaartay Real Madrid.
Kooxda Macallin Zinedine Zidane ayaa la kulantay kaliya hal guuldarro 15 kii kulan ee ugu dambeysay La Liga.